China Self Brewed Fresh Beer Equipment စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |ခုန်ပါ။
ကိုယ်တိုင်ချက်လုပ်ထားသော လတ်ဆတ်သော ဘီယာပစ္စည်း
ကိုယ်တိုင်ချက်လုပ်ထားသော လတ်ဆတ်သော ဘီယာကိရိယာ ဆိုသည်မှာ ဘီယာထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုသည့် ကိရိယာကို ရည်ညွှန်းပြီး လတ်ဆတ်သော ဘီယာပစ္စည်း၊ မိုက်ခရိုဘီယာ ကိရိယာနှင့် သေးငယ်သော ဘီယာကိရိယာများ ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။ကိုယ်တိုင်ချက်လုပ်ထားသော လတ်ဆတ်သောဘီယာပစ္စည်းများသည် ဟိုတယ်များ၊ ဘားများ၊ အသားကင်များ၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စား ဘီယာချက်စက်ရုံများအတွက် အဓိကအားဖြင့် သင့်လျော်ပါသည်။
Self Brewed Beer သည် မိုက်ခရိုဘီယာ ကိရိယာများဖြင့် ကိုယ်တိုင်ချက်သည့် ဘီယာကို ရည်ညွှန်းသည်။အကြီးစားစက်မှုဇုန်ထုတ်ခြင်းထက် လက်ဖြင့်ချက်သော ဘီယာကို ကိုယ်တိုင်ချက်သည့်ဘီယာဟု ခေါ်သည်။၎င်း၏ ထုတ်လုပ်မှုသည် အချို့သော အကြီးစား ဘီယာချက်စက်ရုံများမှ ထုတ်လုပ်သည့် ပုံစံနှင့် လုံးဝ ကွဲပြားပါသည်။ဂျာမနီတွင် ဘီယာသန့်စင်မှုဥပဒေတွင် ဘီယာချက်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ကုန်ကြမ်းများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြထားသည်မှာ ဖြစ်နိုင်သည်-
ကိုယ်တိုင်ချက်လုပ်ထားသော ဘီယာဧရိယာသည် အရည်အသွေးမြင့် ဘီယာအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အချို့သောအဆင့်မြင့်ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်များတွင် ရောင်းချလေ့ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘီယာစက်ကိရိယာဖြင့်၊ သင့်အတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုများအပြင် ဘီယာချက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် လိုအပ်သော ကုန်ကြမ်းအချို့ကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးရန် တာဝန်ရှိပါသည် (ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ကုန်ကြမ်းကိုလည်း ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်)။
စော်ဖောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် အဓိကအားဖြင့် အပူချိန်နိမ့်သော စော်ဖောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။စော်ဖောက်ချိန်သည် 10 ရက်မှ 21 ရက်ခန့် ၊ အချို့ဂျာမန်ဘီယာဆိုင် ဘီယာဆိုင်တွင် စော်ဖောက်သည့်ကာလ 28 ရက် ဖြစ်သောကြောင့် ဘီယာသည် အပူချိန်နိမ့်သော အခြေအနေတွင် ဖြည်းဖြည်းချင်း အချဉ်ဖောက်ကာ အရသာပို၍ မွှေးလာကာ အမွှေးအကြိုင်ပို၍ တာရှည်ခံပါသည်။
Home brewed beer သည် အဆင့်အတန်းမြင့်သော ဘီယာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အချို့သောအဆင့်မြင့်ကြယ်ဟိုတယ်များတွင် ရောင်းချလေ့ရှိသည်။
ကိုယ်တိုင်ချက်ထားသော လတ်ဆတ်သော ဘီယာ၏ စက်ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းမှု
ဂျာမန်စတိုင် ဘီယာချက်သည့်ကိရိယာများတွင် အဓိကအားဖြင့် အောက်ပါစနစ်များ ပါဝင်ပါသည်။
1. Malt ကြိတ်ချေမှုစနစ်
2. Saccharification၊ ပွက်ပွက်ဆူနှင့် filtration စနစ်
6. တည်နေရာ အလိုအလျောက် သန့်ရှင်းရေးစနစ်တွင် CIP
ဂျာမန်စတိုင် ဘီယာထုတ်လုပ်သည့် ကိရိယာကို ကြေးနီနှင့် သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ဆပ်ပြာရည်အိုး၏ အနီရောင်ကြေးနီသည် ရှေးဟောင်းနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည်။စက်ပစ္စည်းသည် လည်ပတ်ရလွယ်ကူပြီး ဆူညံသံကင်းစင်ကာ ညစ်ညမ်းမှုကင်းစင်သည့် လျှပ်စစ်အပူပေးမုဒ်ကို အသုံးပြုသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် ဟိုတယ်တစ်ခုစီ၏ ပကတိအခြေအနေအရ ဘီယာပစ္စည်းများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်၊ သို့မှသာ ဘီယာပစ္စည်းများသည် ဟိုတယ်အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ဟာ့ဒ်ဝဲဖြစ်လာပါသည်။ဤကဲ့သို့သော ဝိုင်ချက်လုပ်ခြင်းမျိုးနှင့် ဝိုင်မြည်းစမ်းသည့်အရက်ဆိုင်များနှင့် စားသောက်ဆိုင်များသည် မြို့ပြဘဝတွင် ပို၍ထင်ရှားလာပါသည်။
ဟိုတယ်တစ်ခုတွင် ဘီယာအိမ်ရှိခြင်းသည် ဘီယာချက်စက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ညီမျှသည်။သူမသည် နွေရာသီတွင် အအေးလတ်ဆတ်သော ဘီယာကို ထုတ်လုပ်ရုံသာမက ဆောင်းရာသီတွင် ပူနွေးသောဘီယာကို ထုတ်လုပ်နိုင်ရုံသာမက အဝါရောင်ဘီယာ၊ အနက်ရောင်ဘီယာ၊ အနီရောင်ဘီယာ၊ စပီရူလိုင်းနားစိမ်းဘီယာနှင့် အမျိုးမျိုးသော အသီးအနှံများကဲ့သို့သော စားသုံးသူများအတွက် အရသာနှင့် အာဟာရရှိသော လတ်ဆတ်သောဘီယာကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများအတွက် လတ်ဆတ်သော ဘီယာအရသာ။၎င်းသည် ဆိုက်တွင် ဘီယာထုတ်လုပ်ရုံသာမက သုံးစွဲသူများအား အဆင့်မြင့်မားသော သောက်သုံးမှုကို ခံစားရင်း အရည်အသွေးမြင့် ဘီယာထုတ်လုပ်ခြင်း၏ ထူးခြားသော ကျက်သရေကို ခံစားရစေပါသည်။
ဂျာမန်ဘီယာပစ္စည်းများဖြစ်သည့် မုယောဘီယာ၊ ကောက်ဘီယာ၊ စပီရူလိုင်းနားဘီယာ၊ ဗလဆန်သစ်တော်ဘီယာနှင့် အချိုရည်ဝိုင်များ- ဘီယာဈေးကွက်အတွင်း ဘီယာသောက်သုံးမှုဈေးကွက်အတွင်း လူကြိုက်များလာခဲ့သည်။ကိုယ်တိုင်ချက်လုပ်ထားသော ဘီယာ၏ ကုန်ကြမ်းများမှာ Australian malt ၊ Czech top hops နှင့် German fresh yeast များဖြစ်ပြီး ဆန်ကဲ့သို့သော အရန်ပစ္စည်းများကို မထည့်ဘဲ မုယောစပါး၏ သဘာဝကျန်းမာရေးကို အားကောင်းစေရန် အာရုံစိုက်ထားသောကြောင့် သွေးတွင်းအဆီဓာတ်ကို လျော့ချနိုင်ပြီး သွေးကြောများကို ပျော့ပျောင်းစေပါသည်။ အရက်သောက်ပြီးနောက် နှလုံးရောဂါကို ကာကွယ်ပေးပြီး အဝလွန်ခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
နောက်တစ်ခု: ငါးသေတ္တာ ကိရိယာ
သေးငယ်သော နို့နှင့် ဒိန်ချဉ် ဒိန်ခဲ ထုတ်ယူခြင်းလိုင်း
100% သဘာဝနဂါးသီးဖျော်ရည်စစ်စစ် Powder Pro...
ဒီဇိုင်းသစ်ဖျော်ရည်ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်း / သစ်သီးဖျော်ရည် ...
အလိုအလျောက် Coke / Sprite / Gas Drink Filling Pro...
ခရမ်းချဉ်သီးအမှုန့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအတွက် အဓိကပရောဂျက်ကို ဖွင့်ပါ။